NLD to Hold Rare ‘Special Meeting’ this Month / အဖွဲ့ချုပ် အထူးဆွေးနွေးပွဲ ခေါ် | Save Burma
NLD to Hold Rare ‘Special Meeting’ this Month / အဖွဲ့ချုပ် အထူးဆွေးနွေးပွဲ ခေါ်
This post is copied from Irrawadday.
By WAI MOE Thursday, April 16, 2009
File photo shows women members of the National Democracy League for Democracy gather last year outside the headquarters in Rangoon. (Photo: AP)
Burma’s main opposition party, the National League for Democracy (NLD), plans to holdarare special meeting on April 28-29 to discuss what spokesman Han Thar Myint described as “several matters important for the country.”
These matters were likely to include the proposed 2010 general election, Western sanctions against Burma andaproposed review of the newly adopted constitution, Han That Myint told The Irrawaddy on Thursday.
The meeting will be attended by the party executive, those NLD members who were successful in the 1990 election, senior members and representatives of the women’s and youth sections of the party,
“The meeting will be more like an open discussion on several matters important for the country,” Han Thar Myint said.
Invitations to the special meeting were sent out earlier this month by NLD chairman Aung Shwe, who said the executive committee would read “a paper” to participants. Han Thar Myint did not say what the paper would contain.
The NLD, led by democracy icon Aung San Suu Kyi, was formed after the 1988 uprising and went on to win more than 80 percent of constituencies in the 1990 general election, the result of which was ignored by the junta.
In its 20 years existence, the NLD has beenafrequent target of the regime. Its offices across the country have been frequently closed down, many of its members have been harassed and forced to leave the party.
In those two decades, the NLD has been able to hold only two large-scale meetings, once before the 1990 election andasecond in 1997.
An attempt to arrangeameeting in August 1998 of members elected in the 1990 poll failed when the junta arrested several who had planned to take part. Restrictions were also placed on members’ travel.
Since his release from prison in September 2008, prominent NLD leader Win Tin has been trying to reorganize the party, including holding regular executive committee meetings.
No regime reaction to the planned meeting this month has been noted, Han Thar Myint said.
Apart from regime harassment, the NLD has also been targeted by critics of its ageing leadership and lack of reform. All executive committee members, with the exception of Suu Kyi and Khin Maung Swe, are in their eighties.
NLD sources say no reform of the party leadership can be undertaken because of restrictions by the regime.
An NLD decision on whether or not to participate in the 2010 election is still awaited. The party has, however, called forareview of the constitution adopted in 2008, but last month junta leader Snr-Gen Than Shwe rejected the proposal.
The constitution reserves 25 percent of parliamentary seats for military officials and assures the militaryaleading role in Burma’s politics.
Copyright © 2008 Irrawaddy Publishing Group | http://www.irrawaddy.org
အဖွဲ့ချုပ် အထူးဆွေးနွေးပွဲ ခေါ်
Thursday, 16 April 2009 18:54 ဧရာဝတီ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပြည်နယ်တိုင်း အဆင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အထူး ဆွေးနွေးပွဲ တခုကို လကုန်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေရာ တိုင်းပြည် အတွက် အရေးကြီးသည့် အကြောင်း အရာများကို ဆွေးနွေးကြမည် ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လူငယ် အဖွဲ့ဝင်များ (ဓာတ်ပုံ – အေပီ)
ဆွေးနွေးပွဲတွင် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု၊ အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး၊ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ စသည့် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖြစ်သည့် ဦးဟံသာမြင့်က ဆိုသည်။
“နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဆွေးနွေးကြမှာပါ။ အခြေခံ ဥပဒေ ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ ဆိုတာလည်း ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာ တခု ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု၊ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ တို့နဲ့ ပတ်သက်တာတွေလည်း တက်ရောက်လာသူတွေက ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာတွေလည်း ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်” ဟု ဦးဟံသာမြင့်က ဆိုသည်။
ယခုလ ၂၈၊ ၂၉ ရက်တို့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပွဲကို ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်ခံရသူများ၊ ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းများမှ တာဝန်ခံများ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ခေါ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားစာကို ယခုလ ၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် အောက်ခြေ အဖွဲ့ခွဲများသို့ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့က ပြုစုထားသည့် စာတမ်း တစောင်ကို ဆွေးနွေးပွဲတွင် ချပြမည်ဟု ဖိတ်ကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ စာတမ်းတွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဦးဟံသာမြင့်က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်း မရှိပေ။
ပြီးခဲ့သည့် အနှစ် ၂ဝ အတွင်း အဖွဲ့ချုပ်သည် အာဏာပိုင်တို့၏ ဖိနှိပ်မှုကို အဆက်မပြတ် ခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံအနှံ့ရှိ ရုံးခွဲများ အပိတ်ခံခဲ့ရပြီး အဖွဲ့ဝင်များလည်း အဖွဲ့ချုပ်မှ နုတ်ထွက်ရန် ဖိအားပေး ခံခဲ့ရသည်။
“၁၉၈၈ က စပြီးတော့ အဖွဲ့ချုပ်က အစည်းအဝေးကြီး နှစ်ကြိမ် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး ကော်မတီဝင်တွေ တက်ရောက်တဲ့ အထူး အစည်းအဝေး တရပ် ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၉၇ မှာလည်းပဲ နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင် အဆင့်ဆင့် ပါဝင်တဲ့ အစည်းအဝေးကြီး တခု ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးဟံသာမြင့်က ရှင်းပြသည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ချုပ်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် အစည်းအဝေးကြီး တခု ပြုလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ အထမမြောက်ခဲ့ပေ။ အာဏာပိုင်တို့က အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် ရာပေါင်းများစွာကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီး၊ တချို့ကို ခရီး သွားလာခွင့် ကန့်သတ်လိုက်သည်။
လကုန်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် ပြည်နယ် တိုင်း အဆင့် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်မည့် ဆွေးနွေးပွဲကို ပြင်ဆင်နေစဉ် ယခုအချိန်အထိ အာဏာပိုင်များထံမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက် တစုံတရာ ပြုလုပ်ခြင်းကို မတွေ့ရသေးဟု ဦးဟံသာမြင့်က ပြောသည်။
အကဲခတ် တချို့က အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များ အသက်အရွယ် အလွန်အမင်း ကြီးရင့်လာခြင်းကို ထောက်ပြကြပြီး၊ အနှစ် ၂ဝ အတွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု မရှိခြင်းကို ဝေဖန် အပြစ်တင်နေကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဦးခင်မောင်ဆွေမှလွဲ၍ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများမှာ အသက် ၈ဝ ဝန်းကျင်များသာ ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ချုပ် သတင်းရပ်ကွက်များ၏ အဆိုအရ အဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မရှိခြင်းမှာ အာဏာပိုင်တို့၏ ကန့်သတ်မှုများ၊ ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
လာမည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အကြောင်း ပြောဆိုကြမည်၊ သို့သော်လည်း အဖွဲ့ အတွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်ဟု ဦးဟံသာမြင့်က ဆိုသည်။
ဤအတောအတွင်း အဖွဲ့ချုပ်က ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားဝင် ကြေညာခြင်း မရှိသေးပေ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြန်လည် သုံးသပ်ရေးကို ပြီးခဲ့သည့် နှစ်က စတင်ပြီး တောင်းဆိုခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ပြီးခဲ့သည့်လက ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားတခုတွင် အခြေခံ ဥပဒေ ပြန်လည် သုံးသပ်ရေးကို ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်သည့် မိန့်ခွန်းကို ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြေခံ ဥပဒေ အရ လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်၏ ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အလို အလျောက် ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း တပ်မတော်က တာဝန်ယူမည် ဖြစ်သည်။
Posted in ဧရာဝတီ
Tagged with NLD
« UN chief shares US concern about Aung San Suu Kyi
မြန်မာပြည်သို့ မုန်တိုင်းတခု ၀င်နိုင် »
Facebook, Social Media and technology needs to be fixed for the good of humanity - Next Big Future June 22, 2018
Who is Dawei Gyi, aka U Aung Lwin,akey suspect in the Malaysia drug haul? - The Irrawaddy News Magazine June 22, 2018
Study Warns of Public Backlash to China's BRI Projects - The Irrawaddy News Magazine June 22, 2018
UN Chief 'Personally Concerned' about Return of Christians to Iraq and Syria - Christianheadlines.com (blog) June 22, 2018
Gallery: Record numbers forced to flee homes - sbDirtySouthSoccer June 22, 2018
As Tensions Escalate In Kachin, Why Is The UK Not Doing More? - HuffPost UK June 22, 2018
Rohingya Crisis Is Making Some In Myanmar Rethink Their Views Of ... - NPR June 21, 2018
US Departure From UN Rights Council Leaves Vacuum - Voice of America June 20, 2018
Three Local Suspects Sought,4in Custody in Record Drug Shipment to Malaysia - The Irrawaddy News Magazine June 20, 2018
Rohingya refugee camp leader in brutal murder amid power struggle and monsoons - Telegraph.co.uk June 20, 2018
Devotees stretch as Yoga Day marked in Myanmar and around the world June 23, 2018
SNLD have not yet confirmed the resignation of their chairman June 23, 2018
Concern voiced over industrial pollution of Myanmar’s Hline River June 23, 2018
Myanmar officials provide aid in wake of floods June 23, 2018
Four students missing in Kachin State June 22, 2018
May Htwai June 22, 2018
Not all Kachin IDPs can get WFP assistance June 22, 2018
Thai employer sacks 16 Myanmar migrant workers over protest June 22, 2018
UN envoy to Myanmar: perpetrators of Rakhine attacks must be held accountable June 22, 2018
အိန္ဒိယတောခေါင်းတစ်ဦး စပါးအုံးမြွေနှင့် ဆယ်လ်ဖီရိုက်စဉ် မြွေက ရစ်ပတ်ညှစ်ခဲ့လို့ အသည်းအသန် ရုန်းခဲ့ရ June 23, 2018
အန္တရယ်ရှိ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတွင်း အမြန်ရေယာဉ်များအစား သင်္ဘောများ ပြေးဆွဲမည် June 23, 2018
နွား ၂၂ ကောင်ကို သယ်ယူခွင့်မိန့်မရှိဘဲ သယ်သူများကို မင်းဘူး-အမ်း လမ်းတွင် ဖမ်းမိ June 23, 2018
မအူပင်တွင် ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးကို ခင်ပွန်းဟောင်းက ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား June 23, 2018
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယောဂနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ June 23, 2018
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဖက်ဒရယ်စနစ် ( ၃ ) June 23, 2018
ရွှေကျင်နိကာယ ဥပဥက္ကဋ္ဌ တွဲဖက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ပျံလွန်တော်မူ June 23, 2018
အစိုးရသိမ်းယူထားသည့် ပိုလျှံမြေကို ပြန်မပေးဘဲ သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော် ပြုလုပ်မှု အမတ်ဝေဖန် June 23, 2018
အစားအစာ လေလွင့်မှုပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး အင်ဒိုနီးရှား ကြိုးပမ်း June 23, 2018
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ဆိုသော်ငြား အချိန်ယူရဦးမယ်လို့ NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေး ကော်မတီပြော June 23, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-23 01:31 June 23, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-22 17:31 June 22, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-22 14:31 June 22, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-22 13:31 June 22, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-22 01:31 June 22, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-21 17:31 June 21, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-21 14:31 June 21, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-21 13:31 June 21, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-21 01:31 June 21, 2018
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2018-06-20 17:31 June 20, 2018
Suspected Chinese lasers target US aircraft over the Pacific June 22, 2018